Live Blackjack Guitle - Play Blackjack Live (2022)
Chikuru	/ Variations	/ Tamba LIVE LIVEJACK
Mutambo weBlackJack wakamuka nekukurumidza. Nhasi, Live BlackJack ndeimwe yemastess yemasikati yepamhepo, uye yakarumbidzwa nemutengi seimwe yemitambo yakanakisa yeBlackjack yekutamba. Nepo Live Blackjack Online inoshandura mamwe emitemo, yakawanda yemutambo inoramba yakasimba. Ngatitarisei.
Basics ye live blackjack
Iko hakuna zvakawanda zvakasiyana-siyana pakati pemutambo we live blackjack uye mamwe madzinza aungave wakasangana naMound Online. Musiyano wakakosha pano ndewekuti iwe unotamba mukambani yemutengesi wekurarama uye uchiri kunakidzwa nemutambo kure, nepo tsika yepamhepo inotambwa ne software chete. Hezvino zvimwe zvinhu zvekucherekedza pasi:
Live BlackJack inoridzwa nemutambi kupokana neimba
Mutambo wega wega uchawedzera pakati pemaviri uye masere masere madhiri
Zvekare zvakare, iwe unofanirwa kusvika pamatanho makumi maviri nemasere pasina kubhururuka
Makadhi ese ari pakati pemaviri uye pfumbamwe chengetedza kukosha kwavo kumeso
Makadhi ese kubva kune gumi kusvika pamambo akakosha gumi mapoinzi
Ace inogona kuve yakakosha 1 kana 11 mapoinzi zvichienderana nemamiriro ezvinhu
Kune mamwe mimwe misiyano midiki yekucherekedza pasi apa. Rarama Online Blackjack Mitambo ichajairwa nemitemo miviri, zvichienderana nekasino, yemakadhi emutambi. Ivo vanogona kunge vakabirirwa chiso pasi kana kutarisana.
Nekudaro, mutengesi achangoda kuti atore kadhi rimwe chete kumusoro uye imwe kadhi kumeso pasi. Kadhi rechipiri rinowanzotambwa mushure mekunge mutambi wafunga kuti chii chavangotora.
Yakanakisa live blackjack kasino nzvimbo
Unotamba sei LIVEJELWJACK?
Zvino zvatakachenesa zvimwe zvezvisiyo zvezvakadzika zvehupenyu hwehupenyu, inguva yekutarisisa kutarisisa mafambiro aunoita chaizvo. Nekuti iwe unogona kutamba demackjack online rarama, pane zvimwe zvidiki zvekugadzirisa kumitemo, asi zvese, maitiro akananga. Ngatitarisei.
Mutambi anohwina pachena kana aine zvakasikwa blackjack (10-point kadhi + ace)
Kana mutambi uye mutengesi ese aine blackjack, mutambo unoenda "kusundidzira"
Pamwe bato racho rinorasikirwa kana dzichiuraya, iwo ruoko rwavo runodarika makumi maviri nemasere
Nekudaro, kana ruoko rwekutanga rwemutambi rwakaderera kupfuura makumi maviri nemasere, vanogona kutevera makosi mazhinji akasiyana ekuita kubva pano. Chaizvoizvo, vatambi vanobvunzwa kuti ivo vanoda kurova, kumira, kaviri pasi, kupatsanurana, kana kuzvipira. Heino tsananguro pfupi yeumwe neumwe:
Hit: Imwe kadhi inobata mutambi.
Mira: Mutambi anofara neruoko rwake uye haabvunze mamwe makadhi.
DZVANYA DZVANYA: Mutambi ane chivimbo mumakadhi avo uye anoda kuwedzera saizi yeBet maviri-fold.
Kupatsanura: Mutambi anosarudza kupatsanura yavo kutanga mumaoko maviri akasiyana uye kumashure ruoko rwutsva nemari yakaenzana.
Surrender: Mutambi haaone nzira yekukunda. Ivo vanozvipira uye vapora hafu yewager yavo.
Kamwe mutambi wacho akaita sarudzo, mutambo weBlackjack Online Kurarama Kunoenderera Nacho Mutengesi Anorarama kugamuchira yavo yechipiri kadhi. Kune mamwe mimwe mitemo inonakidza yekuita pano zvakare:
Kamwe mafambiro ese ari kutamba, maoko anoenzaniswa
Kana maoko ese ane kukosha kumwechete, izvi zvichaguma nekusundira, uye iwe uchawana yako mari
Mutambi achakunda kunyange mari kana mutengesi achidonha
More Live Blackjack mitemo
Iyo kiyi yekukunda mutambo we live blackjack ndeyekutsvaga zvese zvaunogona nezvemitemo yayo. Pane zvinhu zvakawanda zvekufunga pano, asi isu takaita chokwadi chekunyora zvese zvaunoda kuziva nenzira inokurumidza uye inowanikwa. Blackjack Online Live Dester haifanirwe kuve zvakasiyana pane yakawanda mitambo, uye haina. Hezvino izvo zviripo blackjack mutengesi mitambo yekupa.
Mutambo weRarar Dealer Blackjack inotambwa neaviri kusvika masere madhiri
Iwo madhiri anodzimwa mushure mekutenderera kwese kuti aderedze kadhi yekuverenga kadhi
Dai vese vatambi vane maoko akaenzana, mutambo uchaguma nekushambadzira
Mutengesi anogara achirova ruoko rwakakodzera 16 mapoinzi
Mutengesi anozomira pa ruoko rwakapfava
Mutambi anokwanisa kupatsanura kamwe paruoko
Nekudaro, mutambi haazokwanisi kupatsanura 4s, 5s kana makadhi akakosha gumi mapoinzi
Vatambi havazokwanisi kudzvanywa
Vatambi vanogona kungopora pasi pane 9, 10 uye 11s
Ese akapatsanura makadhi uye anokonzeresa maoko anokodzera kupetwa kaviri pasi kubheja
Kana mutengesi ane kumeso-kumusoro Ace, vatambi havachagone kuzvipira
Online Blackjack Live Mutengesi haakambove akavezwa mumabwe. Mune mamwe mazwi, iwe unogona kutarisira mimwe yemirairo iyi kuti ive yakasiyana zvishoma. Nekufara newe, pamasino pamhepo anogara achikuisa iwe neyakajeka runyorwa rwezvinotarisira nemutambo wega wega waunotanga.
Mutambo we LIVEL BLIVEJACKY HUEOT?
Iyo payout pano zviri nyore kwazvo kutevera. Kune yako kunyange mari kubhadhara, iyo chiyero ndi1: 1. Blackjack ichabhadhara 3: 2, uye inishuwarenzi ichabhadharwa pachiyero che2: 1.
Live Blackjack Strategy: Zvokuziva
Zvinonzwisisika, iwe unoda kuve nani pakutamba live mutengesi dealer Blackjack. Iyo avhareji imba yemucheto pano ndeye 0.42%, uye zvisinei nemimwe mitemo madiki, iyo ichave iyo avhareji mukana uyo unobatsira chaizvo. Iyi imba yemupendero inoshanda kumitambo iyo inoratidza chero chinhu pakati pe4 ne8 des.
Pane zvinhu zvishoma zvekuti urambe uchifunga kana uchitarisa kutamba kutamba live blackjack mutengesi. Zvekutanga, iwe haudi kupeta kaviri pane 11 kupesana neyekutengesa's's's's's's
Ramba uchifunga kuti zvakapetwa kaviri kana kupatsanura kunogona kuve nengozi, kunyanya kana iwe uri kutamba zvinopesana nemutengesi.